Si dhakhso ah loogu badalo wmv in MOV (Quicktime) aan Loss Quality r
Maqaalkani waxa uu idin tusiyo sida loo badalo wmv in MOV (QuickTime) ee Windows (Windows 8 taageeray) iyo Mac (Mountain Libaaxa ka mid ahaa) sida ugu fudud ee suurtogalka ah. Iyada oo ay caanka ah ee Windows PC iyo qalabka macruufka, dad badan u leeyihiin in ay helaan waddo ay u isticmaalaan files ee wmv ee Mac OS ama macruufka, ama isticmaal files Mac in Windows oo aan dib u dhac. Taasi waa sababta oo ah, guud ahaan, files Windows aan si toos ah loo isticmaali karaa in Mac ay ka mid yihiin ciyaaraha on QuickTime, abaabulka in Lugood, sixiddiisa in iMovie ama syncing si iPhone, iPad iyo iPod ama qeybsanaan.
Si aad u caawin la isticmaalayo files wmv ee Mac iyo macruufka, waxaad tidhaahdaan, ciyaaro wmv on QuickTime, u hagaagsan wmv in iPad ama aaladaha kale ee Apple, kor loogu qaado files ee iMovie iyo wixii la mid ah, diinta wmv in MOV (QuickTime) waa xal wanaagsan. Halkan qaadataa MOV tusaale ahaan. MOV isticmaalaa geynta lahaansho riixo ee ay Apple Computer iyo taageerada labada barnaamijyadooda Mac iyo aaladaha Apple. Si loogu badalo wmv video in MOV video, heer sare ah waxaa lagu talinayaa in aad la isticmaalayo xirfadle Video Converter in Windows (Windows 8 taageeray) ama Video Converter u Mac , labadaas arrimood oo aad noqon lahayd mid caawisa oo weyn inta lagu jiro wmv in ay MOV (QuickTime) diinta.
Qeybta 1: Hel wmv Best si ay MOV Video Converter
Qeybta 2: wmv Free in Converter MOV
Qeybta 3: Online wmv in Converter MOV
• Beddelaan wmv in MOV, AVI, MP4, MKV iyo qaar badan oo ah qaabab video.
• Beddelaan wmv in QuickTime, iPhone, iPad iyo qalab kale oo la filaayo in presets.
• Beddelaan wmv in qaabab ka comptible la iMovie ama Final Cut Pro.
• A DVD gubi poweful ay gubaan video inay DVD in daqiiqo.
• Edit videos (goo, dalagga, isku shaandheyn, ku dar saamayn, iwm) iyo soo bixi online videos.
Qaadataa Halkan diinta qaab wmv in qaab MOV in Windows (Windows 10 ka mid ah) madal tusaale ahaan. Tani app daaqadaha ayaa la casriyeeyay, kaas oo kaa caawin kara inaad badalo videos 30X dhaqso aan khasaaro tayada wax.
Sida loo badalo wmv in MOV
1. Load wmv files si wmv in ay MOV (QuickTime) Converter
Waxaa jira laba hab oo aad u ku darto video files loogu celiyaa,
Si toos ah jiidi oo hoos u files warbaahinta galay video wmv in ay MOV video Converter
Tag "Beddelaan" menu oo markaas dooran "Add Files"
Fiiro gaar ah: app wuxuu bixiyaa shaqada diinta bacth, waxaa laguu ogolyahay in loogu badalo dhawr files ee files wmv in MOV files hal mar.
2. Set MOV (QuickTime) sida qaab wax soo saarka
Tag "qaab"> "Video" oo liiska ku jirta qaab hoos-hoos dhinaca midig ee interface ugu weyn, ka dibna dooran "MOV". Haddii aad ku talajirto in ay u gudbiyaan faylasha diinta macruufka qalabka sida iPad, iPod iPhone ama iwm aad aad doorato presets ee ay bixiyeen xirfadeed kartaan Video Converter si aad looma baahna dhigay xalka, heerka jir iwm keligaa. Iyo presets waxaa ku jira "Device"> "Apple" category.
3. Start si loogu badalo wmv in MOV (Windows 10 ka mid ah)
Hit on the "Beddelaan" button iyo ka tago video wmv in ay MOV video Converter ku dhameysan inteeda kale si toos ah. Intaa waxaa dheer, haddii aadan ku qanacsaneyn aad video, sida qorshaha si ay u dhinto ku laayeen madow ama isku shaandheyn video iwm, waxaad isticmaali kartaa hawlaha edit waxtar leh ay bixiyaan software ah. Waxaad tegi kartaa Guide User of Video Converter si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah.
Haddii aad u doonayaa inaan badalo wmv in MOV Mac ​​(Mountain Libaaxa, Libaaxa ka mid ah), waxaad tagi kartaa talaabo kale oo hagitaan talaabo talaabo ah Video Converter u Mac si ay u helaan Macluumaad dheeraad ah. Tani Converter u Mac sidoo kale waa xirfad weli si sahlan loo isticmaalo Mac app suuragelinayo in aad u leedahay in diinta deg deg ah oo hufan.
Video Tutorial: Sida loo Beddelaan wmv in MOV
# 1. Free Free wmv in Converter MOV: Wondershare Video Converter Free
Tani wmv si xor ah u Converter MOV badalo kartaa wax kasta oo ku dhowaad video caadi ah oo maqal ah in qaabab aad rabto. Waxa kale oo aad isticmaali karto si aad Macdan music ka filimada aad ugu jeceshahay. Waxa kale oo ay kuu ogolaanaysaa inaad xaalkaa videos leh hawlaha video tafatirka awood badan.
Pro: 100% free video Converter, wax kharash dheeraad ah
1. Waxa kaliya ee kuu ogolaanaysaa inaad badalo videos in qaar ka mid ah qaababka caadiga ah. 3D iyo HD videos kuma jiraan.
2. Tayada video saarka waa ka hooseeyaa Video Converter Ultimate
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan wmv in MOV (Quicktime) On Mac / Win